Inona no atao hoe tagging? Ampiasao ny fango Keyword ho an'ny fikambanana mpaka sary
Software Famolavolana Sary
Inona no atao hoe tagging?
Mianara amin'ny fomba handaminana sy hijerena sary
Azo inoana fa efa nandre ny teny hoe "tagging" ianao eo amin'ny sehatry ny fikarakarana sary dizitaly. Nampiasaina tao amin'ny tranonkala izy mba hizarazarana pejy amin'ny tranonkala sosialy toy ny del.icio.us sy ny hafa. Adobe's Photoshop Album digital organizer nitondra ny tagging concept ho an'ny maintream amin'ny sary dizitaly, ary nanampy tamin'ny famoahana ny fironana ny tranonkala malaza mpiserasera amin'ny serasera. Amin'izao fotoana izao dia maro ny fandaharana fandaharana fandaharan'asa rindrambaiko mampiasa ny metadora "tag", anisan'izany ny Corel Snapfire, ny Picasa Google, ny Microsoft Digital Image ary Windows Photo Galley ao amin'ny Windows Vista.
Inona no atao hoe andro?
Ny teny dia tsy misy afa-tsy teny fanalahidy ampiasaina hamaritana antontam-baovao iray, na tranonkala iray, na sary dizitaly na karazana antontan-taratasy dizitaly. Mazava ho azy fa nandamina sary dizitaly tamin'ny alalan'ny teny sy ny sokajy ny olona nandritra ny fotoana lava, saingy tsy voatery antsoina foana ny marika.
Raha ny hevitro, ny fampitahana nataon'i Visual Adobe momba ny famoronana marika ao amin'ny Photoshop Album dia nanampy ny fisainana ho azon'ny daholobe kokoa. Na izany na tsy izany, ny teny fototra na ny sokajy dia zavatra iray misongadina, fa ny tag dia zavatra azo tsapain-tanana izay azonao jerena, toy ny fanomezana na fanomezana mari-pankasitrahana. Ny interface interface an'ny mpampiasa Adobe dia mampiseho fanehoana ara-bakiteny ny hetsika fanaovana tagging. Ny teny fanalahidinao dia aseho ara-bakiteny ho "marika" ary azonao atao ny manisika sy mametraka azy ireo eo amin'ny saryo mba "hampidirana" azy ireo eo amin'ny sary.
Ny làlana taloha: Ordinatera
Ny endriky ny ordinatera dia matetika ampiasaina ho fomba fiasa sy fikarakarana angona nomerika, saingy voafetra ny fetrany. Ny tena manan-danja indrindra, indrindra ho an'ny fikambanana nomerika digitale , dia ny fananana iray monja dia mety ho napetraka fotsiny eo amin'ny solosaina afa-tsy ny duplicated azy.
Ohatra, raha manana lahatsary nomerika amin'ny filentehan'ny masoandro ianao nandritra ny vakansinao tao amin'ny Indian Rocks Beach, Floride, dia niatrika ny olana ianao na hametraka izany ao amin'ny ordinatera ho an'ny masoandro, na amin'ny sarimihetsika, na amin'ny vakansinao. Ampiasao ao amin'ny lahatahiry telo rehetra izy io dia fako ny habaka fifandraisana ary mamoritra fahasahiranana maro rehefa miezaka ny manara-maso ny dika mitovy amin'io sary io ianao. Fa raha asiana sary fotsiny ao anaty ordinatera fotsiny dia tsy maintsy manapa-kevitra izay mifanaraka amin'ny tsara indrindra ianao.
Ny lalana vaovao: Tagging
Mampidira marika. Ny fanasokajiana fa ny sarimihetsika masoandro dia tsy dia manana olana firy amin'ity hevitra ity: Mampifandray azy amin'ny teny filentika, Indian Rocks Beach, vakansy, na teny hafa mety mety.
Ny hery marina misy ny marika dia aseho rehefa tonga ny fotoana hahitana ny sarinao any aoriana. Tsy mila tsaroanao intsony hoe aiza ianao no mametraka izany. Mila mieritreritra ny lafiny sasany amin'ilay sary izay mety nampiasanao tamin'ny tag ianao. Ny sary mifandraika amin'io tag io dia azo aseho rehefa mitady azy.
Ny tags dia tena ilaina tokoa amin'ny famantarana ny olona ao amin'ny sarinao. Raha manazava ny sary tsirairay amin'ny anarana tsirairay ianao, dia azonao atao ny mahita ny sary rehetra misy anao manokana ao anatin'ny fotoana fohy. Azonao atao ihany koa ny mampifangaro sy manilika ireo marika mba hanatsarana ny valin'ny fikarohana. Ny fikarohana an'i "Suzi" sy "puppy" dia hampiseho sarin'i Suzi miaraka amin'ny puppy iray. Manaisotra "fitsingerenan'ny andro nahaterahana" avy amin'ilay fangatahana fikarohana ihany koa ianao ary hahita ny sarin'i Suzi miaraka amin'ny puppy afa-tsy ireo izay marihina hoe "fitsingerenan'ny andro nahaterahana."
Tagging sy Ordinatera amin'ny Harmony tonga lafatra
Ny tagging dia manana tombontsoa sasany ihany koa. Ny fampiasana labozia dia mety ho lasa tsy miraharaha izay tsy misy eto an-toerana. Misy fakam-panahy hamoronana marika marobe na marika manokana ihany koa amin'ny fitantanana ireo an-jatony amin'izy ireo dia nanjary toy ny manelingelina amin'ny fitantanana ireo sary. Saingy miaraka amin'ny lahatahiry, ny lohateny sy ny ratings, dia mety ho fitaovana mahery vaika ny fametahana.
Ny Tagging dia maneho fiovàna manan-danja amin'ny làlana dizitaly, ny voavonjy, ny fitadiavana ary ny fizarana. Raha mbola mampiasa ny ordinatera tranainy amin'ny fikarakarana sary dizitaly ianao, fotoana hanokafana ny sainao amin'ny concept designing. Tsy midika izany fa ny paikadin'ny ordinatera dia handeha hiala, fa mino aho fa ny fanagonana dia fanatsarana manan-danja amin'ny foto-kevitra ara-jeografika napetrakay.
Mainty sy fotsy miaraka amin'ny fiheverana manintona ao amin'ny Photoshop Elements
Teknolojia maromaro amin'ny famafana daty iray avy amin'ny sary
Ahoana ny fomba fanatsarana ny fananganana rubber amin'ny Paint.net
Ahoana ny fametrahana rindran-kisoratra hoso-doko amin'ny Photoshop
Mamono modes amin'ny Photoshop sy Software hafa
Torolalana ho an'ny mpanara-maso ny fitsipiky ny famolavolana amin'ny sehatr'asa
Ahoana ny fomba hamahana rakitra iray tsy azo ovaina ao amin'ny Photoshop
Alohan'ny hividiananao SolidWorks
Ny Business Wiki
Ahoana ny fampiasana AOL Search
Ahoana ny famahana ny olana amin'ny finday Jack Jackphone?
Fantaro ny fomba fametrahana mari-pamantarana iray eo amin'ny PowerPoint Slide
Hashtag Game Trend Twitter: Teny Teny fohy
Ny 7 Best USB Headsets mba hividy amin'ny 2018
Google Spreadsheet IF Function
Zava-mahagaga tsy fantatrareo izay azonao atao amin'ny Google Search
Email Templates miaraka amin'ny Click avy amin'ny Yandex.Mail
Fikarohana torohevitra fikarohana Google
Mpandrindra Core maro samihafa: Mihamafy hatrany hatrany ve?
Ahoana ny fomba hifehezana ny PDA taloha
Ahoana ny fomba hanovana ny fizarana ny hira ao amin'ny Playlist iTunes
Manohana ny MS Outlook 2007 ve i Microsoft?
Fiovan'ny talata sy ny fomba fampiasana ny hashtag
Mifidy lohalaharana amin'ny Kilonga
Tehirizo tsara ny fakantsarinao
Ahoana ny famoahana hafatra tsy tapaka ao amin'ny Windows Live Hotmail
Aiza no hivarotana ny modelinao 3D - iza no tena tsara indrindra?